I-KALKASKA GETAWAY (e-Kalkaska, MI): IXABISO LASEBUSIKA!!! Inqwelo-moya yekhephu ukuya ngqo kwiindlela!
ULELE: 6 Abadala max - AKUKHO IINDWELE EZONGEZELELWEYO
Amagumbi okulala: 3
* I-MANISTEE LAKE (ephantsi kwesanti) yienyawo ze-1000 ukuhamba kwindawo
*KAYAKS + 1 isikhephe esilula, esinealuminiyam (EFUMANEKA KUPHELA usuku lweSikhumbuzo - usuku lwabasebenzi)
*I-SNOWMOBILE kunye neendlela ze-ATV ezikufutshane
• Akuvumelekanga ukutshayela ngaphakathi kwipropati
IXESHA LOKUZOLA: Sicela ukuba iindwendwe zihloniphe abamelwane bethu abakhulu ngokugcina iiyure ezithe cwaka phakathi kwentsimbi ye-11:00 ebusuku kunye neye-9:00 kusasa. AKUKHO IMIQEQESHO--Izindlu zokuRenta kuManzi anezinye iindawo ezininzi ukuba ufuna indawo apho unokukhwaza khona ngomculo wakho, amazwi okanye iziqhushumbisi. HAYI nje eKalkaska Getaway.
I-Kalkaska Getaway ifanelekile kumaqela athuleyo ajonge ekhefini, ngokufanelekileyo abantu abayi-6 ukuba banandiphe i-kayaks, kunye ne-aluminiyam yesikhephe esilula sokuloba esibonelelwa kulonwabo lwakho lwamanzi ehlobo. Eli khaya lifanelekile kwiintsapho zokuloba kunye nabahloli ngokufanayo. Yiza nee-ORV zakho okanye ii-snowmobiles kwaye ukhwele ukusuka kumnyango wangaphambili! Ngeendawo ezininzi zokupaka, iKalkaska Getaway ivumela ii-combos zelori / iitreyila kunye neemoto ezininzi ukuba zipake kwindawo. Ke, bamba abahlobo bakho okanye abantwana kunye nentlanzi, qubha, okanye ukhwele kude kuse!
I-Kalkaska Getaway likhaya elinemigangatho emi-3: Umgangatho ongundoqo (onezixhobo zasekhitshini ze-GE), amagumbi okulala aphezulu kunye negumbi elingaphantsi lokuhamba elilungiselelwe ukonwatyiswa ngetafile ye-shuffleboard, itafile ye-foosball kunye netafile yehoki yomoya ukuze uyonwabele! Nangona ungenako ukulibona ichibi ehlotyeni usuka kule propathi, ukuhambo oluyi-150 yeeyadi ukuya emanzini, apho unokuqubha, uphumle ngapha nangapha, okanye uqalise i-kayak. IChibi laseManistee lichibi elingekho nzulu, kwaye ukusuka elunxwemeni linethambeka elithe chu ngoko lilungele abantwana abancinci (ubukhulu bobunzulu ziinyawo ezili-16). I-Kalkaska Getaway ikwikona ekumntla-mpuma wechibi.
Ukuba ungathanda ukuthatha imizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya eManistee Lake Sands Park, uya kufumana ibala lokudlala, unxweme loluntu, indawo yepikiniki, kunye nokuqaliswa kwesikhephe sikawonke-wonke.
LE COTGE INOMBOLO WANGAPHANDLE WOKHUSELEKO WEVIDIYO.
Njengomaleko ongezelelweyo wokhuseleko, sinazo iikhamera zangaphandle ezifakwe kwi-cottage. Akukho khamera ngaphakathi kwi-cottage.
A/C: Hayi. Igumbi lokulala ngalinye linefeni yesilingi kwaye igumbi lokutyela linefeni yesilingi. Kukho abalandeli abambalwa bomgangatho ojikelezayo onokuthi usetyenziswe kwikhaya lonke.
Izilwanyana: Iintlobo ngeentlobo zeentaka, oomatse, ikalikuni, iingcuka, impungutye, ixhama kunye nebhere.
I-ATV/Iimoto ezihamba ekhephuni: Ewe. Ungaqhuba ukusuka kumnyango wangaphambili ukuya kwiindlela ezikufutshane. ILeetsville Trail yeyona ikufutshane. Nantsi imephu yeendlela ze-ORV ezikufutshane.
Igumbi lokuhlambela #1: umgangatho ongundoqo Ibhafu epheleleyo enebhafu kunye neshawari
Igumbi lokuhlambela #2: phezulu Isiqingatha sebhafu
Igumbi lokuhlambela #3: ukuhamba-ngaphandle kwendawo yokuhlambela engaphantsi, isinki, indlu yangasese; iwasha edibeneyo / isomisi
Ulwandle/Ukuqubha: Iiyadi ezili-150 kuphela kukufikelela echibini. Kwabelwana ngofikelelo kunye namanye amakhaya ama-6. Kukho malunga ne-12 x 4 ft. indawo yesanti apho abantwana banokudlala khona. IChibi laseManistee lichibi elinesanti-ezantsi, elingekho nzulu kakhulu elinethambeka elithe chu. Umntu oqhelekileyo unokuhamba malunga neeyadi ezingama-75 ngamanzi afika kuphela entanyeni yakho. Unxweme loluntu kunye nebala lokudlala likumazantsi-ntshona eLake Manistee.
ULungiselelo lwegumbi lokulala:
Igumbi lokulala #1: umgangatho ophambili: uKumkanikazi
Igumbi lokulala #2: kwigumbi eliphezulu: 3 Queens kunye nebhedi
Igumbi lokulala #3: kwigumbi eliphezulu: 1 Queen kunye nebhedi epheleleyo ngaphezulu kwebhedi
Izikhephe: (ZIFUMANEKA KUPHELA Usuku lweSikhumbuzo - usuku lwabasebenzi) Iikayak ezi-5 ezineepaddles ezineentlobo ngeentlobo zeebhatyi zobomi zabadala. Kukwakho nenqwelwana erhuqwayo enokuthi idityaniswe nesithuthi sakho ukuba ufuna ukuhlola uMlambo iManistee. Ukongeza, iindwendwe zingasebenzisa i-aluminiyam ye-12' yesikhephe sokubhexa esinamaphini kulo naliphi na ichibi elikufutshane. Kukho itreyila yeso sikhephe ngokunjalo, ukuba ufuna ukuyihoxa kwimoto yakho kwaye ujonge. Ungaqhoboshela eyakho injini (ukuya kuthi ga kwi-6 ihashe) ukuba ungathanda ukusebenzisa isikhephe se-aluminiyam ye-12' ukuze ulobe lula. Iindwendwe-zihamba nje ngekayak okanye isikhephe kumgama weeyadi ezili-150 kwaye utsibe ngaphakathi.
Ukuqaliswa kwesikhephe: Ukuqaliswa koluntu, iManistee Lake Sands Park, kumzantsi-ntshona wesiphelo sechibi. Kuya kufuneka utsale isikhephe ngaphakathi / ngaphandle, nangona kunjalo, ungapaka ilori yakho / i-trailer combo kanye phambi kwendlu. (Ungasoloko ulanda usapho lwakho kwidokhi kumgama weemitha ezili-150, kodwa nceda, ungabophelelanga apho! Eli lidokhi ekwabelwana ngalo labucala kwaye ngokuqhelekileyo litsalwa ngaphandle kweVeki yeveki yoMsebenzi.)
Iincukuthu: Iimpukane, iingcongconi, izigcawu kunye neembovane.
IiTV zeCable/Satellite: Akukho ntambo. 1 Samsung Smart TV kumgangatho ophambili. I-TV elandelayo ikwindawo ephantsi yokuhamba-hamba kwaye ineChromecast kunye neDVD.
Inkonzo yeSelfowuni: Verizon/AT&T - Ilungile!
Umenzi wekofu: Imbiza yekofu/isimbo secarafe. Yiza nekofu yakho.
*I-Higgins Lake: imizuzu engama-45
*Torch Lake: 55 imizuzu
*Traverse City: imizuzu engama-40
* Lansing: 2 iiyure 36 imizuzu
* Intaba yeCrystal: 1 iyure 18 imizuzu
* Ibhulorho yaseMackinac: iiyure ezi-1 kunye nemizuzu engama-37 kude
*kufuphi neForbush Corner Cross Country Ski Resort
Idokhi: Idokhi ekwabelwana ngayo yabucala yokulayisha/ukukhuphela kuphela. Ungangabophelela isikhephe sakho kwidokhi. (okwexesha)
Umgodi womlilo: EWE! Nceda ugcine imililo ilawuleka kwaye ucime ngokupheleleyo.
Ukuloba: Yiza neepali zakho. IJumbo Bluegill, iJumbo Perch, iCrapie, iPike kunye neWalleye! Okona kuloba kulungileyo kukwiphenyane.
Ilayisensi yokuloba: Ungathenga iphepha-mvume lakho lokuloba kwi-intanethi apha http://www.mdnr-elicense.com/Welcome/Default.aspx
Igrill: Igrisi yegesi (kunye netanki yepropane esecaleni) isegaraji. Siyacela ukuba isetyenziswe kwindawo yokungena kwaye ibuyiselwe egaraji ubusuku ngabunye. Iibhere, iimpungutye kunye neempungutye ziyasebenza ebumelwaneni kwaye ziyathanda ukufumana amanqina azo kwiigrill ezinamafutha.
IVenkile yokutya: Ivenkile eluncedo kunye neSikhululo seGesi (esinamafutha okuzonwabisa!) yimayile enesiqingatha kumzantsi osemazantsi eLake Manistee-The Cove. Igrosari engundoqo iseKalkaska ekumgama oziikhilomitha ezili-12:
Ivenkile yeFamily Fare - 784 S Cedar St, Kalkaska, MI 49646 (231) 258-2101
Northland Food & Family Centre - 2101 U.S. 131, Kalkaska, MI 49646 (231) 258-911
Ukufikeleleka kokukhubazeka: Iindwendwe kufuneka zikwazi ukuhamba ngezinyuko.
Ukuzingela: Akukho ndawo
I-Intanethi: iWi-Fi enokusetyenziswa ziindwendwe. Inkonzo eyomeleleyo.
Iilinen: Ewe, sikubonelela ngamashiti asisiseko kunye neelinen. Njengehotele, iibhedi ziyakwenzelwa wena xa ufika. Ukuba uqinisekile malunga nokubalwa kwemisonto yamaphepha akho, sazise, kwaye siya kuqinisekisa ukuba sishiya ibhedi ivulekele amashiti akho.
Abamelwane: 11 PM IXESHA LOKUTHULA-Nceda ube nesazela kubamelwane abakufutshane, ngakumbi xa uhamba usiya elwandle. Ukwindawo yokuhlala enqabileyo. Nceda, kungabikho mculo ungxolayo, iziqhushumbisi eziqhumayo, okanye ukutshaya ngaphandle kwezinto, ngaphandle kwemidiza. Sinezinye iindawo zakho ukuba ungathanda ukuqhumisa izinto ozithandayo ngelixa useholideyini. Ngokwekhontrakthi yethu, iindwendwe ezingakwaziyo ukuthobela izithintelo zexesha elizolileyo ziya kucela ukuba zihambe, ngaphandle kwembuyekezo.
Ukupaka: iimoto ezi-3 zifanelekile okanye ii-trailer ezi-2 / indibaniselwano yelori.
Izilwanyana zasekhaya: Izinja ezi-2 zivunyelwe, kukho i-$ 75.00 ngentlawulo yesilwanyana ngasinye.
Ubumfihlo: Amakhaya asekhohlo nasekunene kwekhabhinethi.
Indawo: 3-Level ekhaya. Umgangatho ophambili, umgangatho ophezulu, kunye nomgangatho wokuhamba ngaphandle.
Iitawuli: Ewe, sibonelela ngeetawuli. Nceda uze nezakho iitawuli zaselwandle ukuze uzise emanzini.
Iwasha kunye nesomisi: Ewe. Isepha yokuhlamba iyabonelelwa.
Ixesha lasebusika: Ngokuxhomekeke kwimozulu, kunye ne-slope yendlela, i-4 x 4 isithuthi mhlawumbi isithuthi kuphela esiya kukwazi ukufikelela kwi-cottage.
Wood: Ndicela ucwangcise uze neyakho okanye uzise eyakho. Unokuba nethamsanqa ngokwaneleyo lokufumana ezinye zithe saa. Ungathenga iinkuni kwivenkile ekwivenkile ekwisithuba semayile kunye nesiqingatha kumgama osemazantsi eLake Manistee
I-Kalkaska yindawo efanelekileyo xa ujonge iholide. Eli khaya lifanelekile kwiintsapho zokuloba kunye nabahloli ngokufanayo. Yiza ne-ORV yakho okanye ii-snowmobiles kwaye ukhwele ukusuka kumnyango wangaphambili! Ngobuninzi beendawo zokupaka, indawo yokuphumla yaseKalkaska ivumela ii-combos zelori / iitreyila kunye neemoto ezininzi ukupaka kwindawo. Ke, bamba abahlobo bakho okanye abantwana kunye nentlanzi, qubha, kwaye ukhwele kude kuse!
I-Kalkaska Getaway likhaya elinemigangatho emi-3: engundoqo, ekumgangatho ophezulu kunye negumbi elingaphantsi elilungiselelwe ukonwaba ngetafile yebhodi yeshuffle, itafile ye-foosball kunye netafile yeping pong ukuze uyonwabele! Nangona ungaliboni ichibi ehlotyeni usuka kule ndawo, uziimitha ezingama-150 kuphela ukuya emanzini, apho unokuqubha, uphumle, okanye ukhwele isikhephe! IChibi laseManistee lichibi elingekho nzulu, kwaye ukusuka elunxwemeni linethambeka elithe chu ngoko lilungele abantwana abancinci (ubukhulu bobunzulu ziinyawo ezili-16). I-Kalkaska Getaway ikwikona ekumntla-mpuma wechibi.
Cottages kanye kumnyango olandelayo
IiRenti zaManzi eKhenketho yinkampani erentisa ngenkonzo epheleleyo kwaye ifuna ukuqiniseka ukuba wonwabe kangangoko ngeholide yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambili okanye ufumana nayiphi na imiba ngexesha lokuhlala kwakho, nceda ufowunele / ubhale / usithumele i-imeyile! Sifumaneka 24/7.
IiRenti zaManzi eKhenketho yinkampani erentisa ngenkonzo epheleleyo kwaye ifuna ukuqiniseka ukuba wonwabe kangangoko ngeholide yakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngaphambili oka…